Yuusuf Indha-Cadde oo lagu xiray Ugandha, iyo dadaal lagu siidaynayo oo hadda socda. – Radio Daljir
Kampala, Oct 07- Wasiiru-dalwlaha gaashaan-dhigga dawladda KMG ah ee Soomaaliya Shiikh Yuusuf Siyaad ?Indha-Cadde?, ayaa shalay galinkii danbe lagu xiray magaalada Kampala ee xarunta dalka Ugandha.
Ciidanka ammaanka ee dawladda Ugadhana ayaa qabtay wasiirka oo xilligaasi dhax-marayey magaalada Kampala, waxay si khasab ah uga dejinyeen gaarigii uu saarnaa kadib markii uu ka dhago-adaygay amarro ay u soo jeediyeen oo tilmaamayay in uu ka soo dego gaariga isla markaana uu soo fuulo gaariga bileyska.
Goobta lagu qabtay wasiirka oo ahayd meel shaarac ah oo ay dadku ku badan-yihiin, ayaa la tilmaamayaa raggii qabtay wasiirka in ay rasaas ka fureen, taasi oo aan illaa iyo haatan la ogayn wasiirka iyo cid kale toona in ay wax ka soo gaareen.
Darawalkii waday gaariga wasiiru-dawlaha Indha-cadde, ayaa idaacadda VOA-da u sheegay ragga xiray wasiirka in aysan sidan wax dirays ciidan ah oo lagu aqoonsan karo taasina ay dhalisay is afgaran-waa, waxaana uu intaasi ku daray in ay ku hubaysnaayeen baskoolado.
Dawladda Ugandha oo ka hadashay arrintaan, ayaa sheegtay mas?uulkaani in uu si sharci darro ah iskaga soo galay dalka, isla markaana aysan jirin casumaad rasmi ah oo dawladdu u fidisay mas?uulkaasi, waxayna dawladdu intaasi sii raacisay in aysan jir cid ka war haysay imaanshihiisa.
Dhanka kalana safiirka Soomaalida u fadhiya dalka Ugadhan, ayaa sheegay haatan in uu socda dadaal lagu doonayo in lagu sii daayo wasiirka.
Ma jiro wax war ah oo wali ka soo baxay dawladda KMG ah ee Soomaaliya oo ay kaga hadlayso dhacdadaasi, lamana hayo warar tilmaamaya ujeedada wasiirku uu halkaasi u tagay, hase yeeshee tani waxay noqonaysaa markii ugu horraysay oo dawladda Ugandha ay xabsiga u taxaabto mas?uul ka tirsan dawladda Soomalida.